Zimbabwe's ruling party wins majority in parliament, EU questions poll
27 July 2021 - 18:46
News ID: 26823
Publish Date: 17:53 - 01 August 2018
TEHRAN, August 1-European Union observers on Wednesday listed several problems in Zimbabwe’s presidential and parliamentary election, including voter intimidation and mistrust in the electoral commission, as the main opposition leader accused the ruling party of trying to rig the result.
TEHRAN, Young Journalists Club (YJC) -European Union observers on Wednesday listed several problems in Zimbabwe’s presidential and parliamentary election, including voter intimidation and mistrust in the electoral commission, as the main opposition leader accused the ruling party of trying to rig the result.
The observers also questioned delays in releasing the results of the presidential contest in Zimbabwe’s first election since Robert Mugabe was forced to resign following a de facto coup in November after nearly 40 years in power.
The EU’s assessment is critical in determining whether Zimbabwe can shed its pariah status as it could help attract investors and trigger an economic revival.
Russia censures US 'hysteria' over new meddling claim
Zanu-PF wins most parliamentary seats in post-Mugabe Zimbabwe
Zimbabwe ، parliament ، poll